အဘယ်ကြောင့်တစ် ဦး အပိုင်းအစဆေးထိုးပုံသွင်း TPE ကားဖျာအောင်လုပ်ဖို့အပြင်းအထန်တောင်းဆို?
တရုတ်ကိုအစဉ်အမြဲကမ္ဘာ့စက်ရုံဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည် တရုတ်၏အလုံးစုံသောစီးပွားရေးအင်အားတိုးတက်မှုနှင့်အတူကြီးမားသောစျေးကွက်အလားအလာသည်တရုတ်စျေးကွက်ကိုနိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်တရုတ်ဈေးကွက်သို့အလျင်အမြန်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတရုတ်ကားစက်ရုံများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူကမ္ဘာ့စက်ရုံကွန်ရက်သည်တရုတ်အော်တိုထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ တရုတ်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်များအတွက်စုရုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးနိုင်ငံတကာဝယ်လက်များအတွက်အဓိကနေရာဖြစ်လာသည်။
အလိုအလျောက်စားသုံးမှုအဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့်အတူအလိုအလျောက်ထောက်ပံ့ရေးစျေးကွက်သည်နောက်ဆက်တွဲအတွက်မျိုးဆက်သစ်ထုတ်ကုန်များလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် TPE ဆေးထိုးသည့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသောခြေချောင်းများမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၊ ကားပိုင်ရှင်များအားဂျာမန်နှင့်သြစတြီးယား TPE ကားခြေထောက်များကိုမွေးဖွားပေးခဲ့သည်။
ပထမ ဦး စွာဆေးထိုးခြင်းပုံသွင်းခြင်းနှင့်အရည်ကြည်ဖုမှုဖြစ်စဉ်၏ခြားနားချက်ကိုပြောကြရအောင်။
ဆေးထိုးရန်ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၁၀၀% သန့်စင်သော TPE ပစ္စည်းများဖြင့်တီထွင်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ အရည်ကြည်ဖုဖြစ်စဉ်ကို TPO သို့မဟုတ် TPV ကဲ့သို့သော TPE ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ရောစပ်ပြီးအရည်ကြည်ဖု၏သန့်ရှင်းမှုသည်ဆေးထိုးသည့်ပုံသဏ္asာန်နှင့်မတူပါ။ ထို့ကြောင့်၊ တစ်လုံးတည်းသောဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော TPE ကားလုံးသည်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောအရာ၊ ရော်ဘာနှင့်ပိုမိုနီးကပ်မှုနှင့်ခြေထောက်ခံစားမှုပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်။ блистерနည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များသည်ခဲယဉ်းပြီးပလတ်စတစ်နှင့်ဆင်တူသည်။
ဆေးထိုးထားသော TPE ခြေလျင် pad သည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းကိုနောက်ပိုင်းအသုံးပြုမှုကာလတွင်ပုံပျက်သောအခါ၎င်းသည်ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောရေကိုလောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်အတန်ကြာနေရောင်ခြည်ထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုမူလပုံသဏ္toာန်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်။
DEAO ကားဖျာပုံပျက်သောစမ်းသပ်မှု - နာရီပေါင်းများစွာထိတွေ့ပြီးနောက်မူလပုံသဏ္restoreာန်ကိုပြန်ယူပါ။
သက်ရှိများကို ၁-၂ နှစ်ကြာအသုံးခံပြီးနောက်မှည့်သည့်အမြှေးပါးသည်ပြန်လည်မပွားများနိုင်ပါ။
ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှဒီဇိုင်းနှစ်လွှာအလွှာသည် ပို၍ ကြာရှည်ခံသည်။ ခြေဘဝါး၏အောက်ခြေကိုအပိုဆောင်း anti-deformation ခိုင်မာသောနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ buckle လည်းပိုမိုအားကောင်းသောသေးငယ်တဲ့မြင့်မားသောတိကျမှိုကနေပုံသွင်းဆေးထိုးသည်။
သို့သော်အရည်ကြည်ဖုဖြစ်စဉ်သည်အတော်လေးပါးလွှာသည်။ အကယ်၍ အလွှာနှစ်လွှာကိုဒီဇိုင်းဆွဲထားလျှင်ကားဖျာ၏ခိုင်ခံ့မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်သည်ကြီးမားသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံရပ်ခြားရှိအရည်ကြည်ဖုများမော်တော်ကားဖျာအားလုံးသည်အလွှာနှစ်ထပ်ဒီဇိုင်းမထားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Deao သည် TPE ပုံသွင်းဆေးထိုးခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်အဘယ်ကြောင့်တိုက်တွန်းသနည်း ကားဖျာs?
DEA သည်မူလကားဖျာများတီထွင်ခြင်း၌အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကားပိုင်ရှင်အများစုဆီပိုကောင်းတဲ့ကားဖျာတွေယူလာချင်တယ်။ ကားစက်ရုံအဆင့်တွင်ပေါင်းစပ်ထားသောဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ပုံသွင်းထားသော TPE ကားဖျာများသည်အမှန်တကယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ကျသောမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်သည်။